Bridge တည်ဆောက်သူ Android အတွက်အခမဲ့ APK ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » တံတားလုပ်ငန်းခွင်အခမဲ့
တံတားလုပ်ငန်းခွင်အခမဲ့ APK ကို
အကူအညီ function ကိုများနှင့်သန့်စင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် +++ နောက်ဆုံး update ကို +++
တစ်ခုအောင်မြင်သောမာစတာတံတားဆောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြ! သင့်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်နှင့်နက်ရှိုင်းသောချိုင့်, တူးမြောင်းများနှင့်မြစ်များကျော်တံတားများတည်ဆောက်။ စိတ်ဖိစီးမှု Simulator ကိုသငျသညျတညျဆောကျတံတားကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများ၏အလေးချိန်ကိုကိုင်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေး crash လျှင်ရှိမရှိဖော်ပြသည်။
အကြီးလုပ်ငန်းခွင်သကဲ့သို့သင်တို့ထိုကဲ့သို့သောသစ်သား, သံမဏိ, ကြိုးတွေ, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ကရစ်တိုင်အဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းတံတားများအတွက်ကုန်ကြမ်းတစ်ခုအကွာအဝေးအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်တို့သည်လည်းစုံလင်တံတားတည်ဆောက်ရန်ဘတ်ဂျက်အတွင်းနေထိုင်ရန်ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏ရှေးခယျြမှုမြောက်မြားစွာဖြေရှင်းချက်ပေးထားနှငျ့သငျနညျးလမျးမြား၏အရေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတံတားတည်ဆောက်နိုင် - သင့်ဘတ်ဂျက်ကသာကန့်သတ်သည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်ဤပျော်စရာဆောက်လုပ်ရေး sim အတွက်အခမဲ့ run ပါစေ! သင်တစ်ဦးသေလွန်သောသူတို့သည်အဆုံးသို့ run ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအကူအညီ system ထဲကနေတန်ဖိုးရှိသောအကြံပေးချက်များကောက်နိုငျပါသညျ!
အခမဲ့ဗားရှင်းအပြည့်အဝဗားရှင်း၏ပထမဦးဆုံးကမ်ဘာကွီး (8 အဆင့်ဆင့်) ပါရှိသည်။
THE FULL VERSION OF အင်္ဂါရပ်များ:
• + ပိုပြီးရာသီအလိုက် updates မှာ 40 အဆင့်ဆင့်
•4ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ: သစ်သား, သံမဏိ, ကြိုးတွေ, ကွန်ကရစ်တိုင်
•အခမဲ့တည်ဆောက် mode ကိုအကူအညီတောင်းမှုစနစ်
•5က Settings: မြို့, ချောက်, ကမ်းခြေ, တောင်ကြီးတို့, တောင်ကုန်း
•ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦးပစ္စည်းများများအတွက်အရောင် coded ဝန်ညွှန်ပြချက်
"ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပဟေဠိဂိမ်း" - AppEggs.com
v7.0: GDPR နှင့် CCPA နှင့်အတူလိုက်နာမှုဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းများ Google က update လုပ်ဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play
50.21 ကို MB
ရုပ်အိမ် Build & ...
GoodCraft - Build ...
သစ်သား Block ကိုပဟေဠိ
ယူရို Truck ကား ...